Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်)
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ကဘာလဲ။
Listeriosisဆိုသည်မှာဘတ်တီးရီးယားများဖြင့် ညစ် ညမ်းနေသောအစာများကိုစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသောပြင်းထန်သောရောဂါကူးစက်မှုတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုဘတ်တီးရီးယားသည် မကျက်တကျက် ချက်ထားသောအသား နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ Listeriosisသည် ပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ် သော်လည်းအဖြစ်မများပါ။
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်းကိုယ်ဝန် ဆောင် အမျိုးသမီးများ၊ သန္ဓေသားစသည်တို့တွင် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။ Listeriosisသည် လမစေ့ဘဲမွေး ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ မွေးဖွားပြီးမကြာမီပင် ကလေးသေဆုံးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။
မမွေးဖွားခင် ရောဂါကူးစက်ခံရပါကကလေးငယ်များသည် ပြင်းထန်စွာဖျားနာခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသောသူများသည် လည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ကင်ဆာရှိသူများ၊ AIDS ၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးခြင်း နှင့် အသက်ကြီးသူများ
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အချို့လူများတွင် အဖျားတက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှော ခြင်း နှင့် အစာအိမ်နာခြင်းစသောတုပ်ကွေးကဲ့သို့ ရောဂါ လက္ခဏာများဖြင့် ဖျားနာပါသည်။
ဘတ်တီးရီးယားသည် အာရုံကြောစနစ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိပါကရောဂါလက္ခဏာများသည် ပို၍ ဆိုးရွားလာနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက် ကြောတက်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ မျှခြေမထိန်းနိုင်ခြင်း နှင့် စိတ် ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မျက်စိလည်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဖျားနာခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် မကျိုချက်ရသေးသော နို့၊ အသားအူချောင်းစသောရောဂါပိုးရှိနိုင်သောအစာများစားပြီးနောက် ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်ပါကဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။
အလွန်ဖျားခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက် ကြောတက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ် အလင်းထိမခံ နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါကအရေးပေါ်ကုသမှု ရှာဖွေခံယူပါ။ ထိုရော ဂါ လက္ခဏာများသည် ဘတ်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောဦးနှောက် အမြှေးရောင်ရောဂါ ၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်နိုင် သည်။ ထိုရောဂါသည် Listeriosis ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရောဂါဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းသည် Listeria monocytogenesဟုခေါ်သောဘတ်တီးရီးယားပါသော အ စားအစာကိုစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Listeria ကိုမြေ ကြီးနှင့် ရေထဲတွင် တွေ့ရပြီးဓါတ်မြေသြဇာများအသုံးပြု ထားသောမြေနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် မြဲမြံစွာနေထိုင် နိုင်သည်။
Listeria သည် အသားစိမ်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း နှင့် ပြု လုပ်ထားသောအစာများ ( ဒိန်ခဲ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဝက်အူချောင်ညှပ် ပေါင်မုန့်) တို့တွင် လည်းကပ်တွယ်နိုင်ပါသည်။
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသောသူများတွင် Listeriosis ဖြစ်နိုင်ချေ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ။ Listeriosisသည် မိခင် တွင် မပြင်းထန်သောရောဂါသာလျှင် ဖြစ်စေသော်လည်းသန္ဓေသားအတွက် အကျိုးဆက်များမှာအလွန်ဆိုးရွားပါ သည်။
ဥပမာ- ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ အသေမွေးခြင်း၊ လမစေ့ဘဲမွေးခြင်း၊ ရောဂါပိုးကူးစက်ပြီးမွေးဖွားပြီးသေဆုံး ခြင်း။
Listeriosisသည် အောက်ပါ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသောသူများတွင် လည်း ဖြစ်ပွားပါသည်။
အသက်။ ၆၅နှစ်အထက် လူများသည် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချို သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ စသောအခြားအခြေအနေရှိသူများ
လေးဖက်နာရောဂါအတွက် ဆေးအချို့ သောက်ခြင်း
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် သင်ခံစားရသောရောဂါလက္ခဏာများ အ ပေါ်မူတည်၍ Listeria ကူးစက်မှု ဟုတ်မဟုတ်ကိုအဖြေရှာစစ်ဆေးပါမည်။ ဆရာဝန်သည် ကျန်းမာရေး နှင့် ဆေးမှတ် တမ်းကိုလည်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါမည်။ လိုအပ်ပါကရောဂါ အဖြေရှာမှု တိကျစေရန် သွေးစစ်ခြင်း၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီစစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Listeriosis (လစ်စတီရီရိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် ကုသသောနည်းလမ်းသည် အမြန် ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ လူနာများသည် ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူသင့်ပါသည်။ ပဋိဇီဝဆေးများကိုသွေးစီးကြောင်းတွင်းသို့ တိုက်ရိုက် ထိုးသွင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပဋိဇီဝဆေးဖြင့် ကုသမှုသည် ၂ ပတ်လောက် ကြာနိုင်ပါ သည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ် မကောင်းသောသူများသည် ရောဂါ ပြန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ကြာရှည်စွာကုသရန် လိုအပ်ပါ သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းသည် Listeriosisကိုကုသရာတွင် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် Listeriosisထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
သင်အသုံးပြုနေသောဆေးအားလုံးကိုဆရာဝန် အားပြောပြပါ။ (သောက်သုံးရန် ညွှန်ကြားထားသောဆေးများ၊ ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းများ)
ဥ၊ အသား၊ ကြက်၊ဘဲစသောတိရစ္ဆာန် ထွက်ကုန် များကိုချက်ပြုတ်ပြီးမှ စားပါ။
အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမစားခင် ရေဆေးပါ။
စားသုံးအပြီးတွင် လက်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုဆပ်ပြာပါသောရေနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။ အထူးသ ဖြင့် အသားစိမ်း ဖြင့် ထိတွေ့အပြီးတွင် ဆေးပါ။
Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012.
Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1164
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/listeria-infection/basics/risk- factors/con-20031039. Accessed July 14, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/listeria-infection/basics/risk- factors/con-20031039. Accessed July 14, 2016.